Federaaliisim - Wikipedia
Dawlado Mid Ah
Dawlado Federaal Ah
Waxaa asigana ku xigay oo mar labaad kor uqaaday Dawlad kasta ee dhalataa in ay qaadato nidaamka Federaalka ah ninka lagu magacaabo Md C/raxmaan Faroole ee ah Madaxa maamulka Puntland.
Maamulada dhisan ilaa iyo hadda
1 Somaliland 1991
9 Koofur galbeed 2010
Aduunka inta federal ah
TFG da iyo maamulada hoos yimaada
Qodobada dastuurka faderalka
(a) Heerka degaanka oo hay’adaha iyo qaybaha bulshadu ay noqonayaan asaaska xukuumadda, kana qaybgalyaan sameynta golayaasha Dawladdaha hoose ee ay tahay in la dhsio.
(1) Dowlad-goboleed kastaa waa inay ku dedaashaa xiriiri skaashi ku dhisan inay layeelato xukuumadaha ay isku heerka yihiin iyo kuwa heerarka kale. Xukuumad waliba waa inay ilaalisaa xuduudda awoodaheeda iyo awoodaha kuwa kale. Waa inay dhiirri-gelisaa xiriir saaxiibtinnimo oo ay yeeshaan xukuumadaha ka jira meelaha kale ee dalka iyo dadweynahooda. Xukuumad waliba waa inay hubisaa xukuumadaha kale inay ku war- gelisey Siyaasaddaha amaba hawlaha gudaha xuduuddeeda ka socda; kuwaas oo laga yaabo inay meelo kale saamayn ku yeelan karaan. Meeshii ay suuraggal tahayna waa in xukuumaduhu si wadajir ah ay mashaariic wadaag ah uga dhaqan-geliyaan.
(3) Xukumadaha Dawlad-goboleedyadu waa in ay siiyaan dawladaha hoose awood ay ku mamulaan sharciga iyo barnamijyadooda, si waafaqsan mabda’a ( b) ee mabaadi’da federaalka ah ee ku xusan qodobka 56(1). Hawlaha waxaa loogu wareejinayaa goleyaasha Dawladdaha hoose si tartiib- tartiib ah oo la socota hadba koritaanka kartidooda. Sharci federaali ah ayaa tilmaami doona qaabdhismeedka ay u raaci doonaan dawlad-goboleedyadu awood-wareejin kasta oo ay dawladaha hoose ku wareejinayso xilalka.
(4) Sharciga doorashooyinka federaalku waa in uu siiyaa muwaadiniinta degan degmada magaala-madaxda xaq ay ku dooran karaan wakiilo u matala Golaha Shacabka, waana in aysan matalaadaas ku waayin deganaanshada ay deganyihiin degmada magaala-madaxda Dawladda Federaalka awgeed.
(2) Magaala-madaxda federaalku kuma biiri karto gobol kale ma noqon karto qayb Dawladda-goboleed kale ku dhul ballaarsato.
(2) Dawlada federaalka iyo xukuumadaha dowlad-goboleedyadu way ku heshiin karaan in ay dhistaan maxkamad gaar ah oo lagu xaliyo khilaafaadka dhaxsada Dawladdaha.
(3) Khilaafka u dhexeeya Dawladdaha ee lagu xallinwaayo dhexdhexaadin iyo wadaxaajood waa in loo gudbiyaa Makamada Dastuuriga oo go’aan ka gaaraysa.
2) Dawlad-goboleed cusub ayay sameysan karaan dawlad-goboleedyo jiray haddii tiro macquul ah oo ah hal iyo wax ka badan oo ka mid ah dawlad-goboleedyadaas ay doonayaan in ay sameystaan dawlad-goboleed ayna sameynta dawlad-goboleedkaas tahay sida kaliya ee ay ku gaari karaan danaha guud ee ay wadaagaan
3) Dawlad-goboleed cusub waxaa la samayn karaa haddii arrintaas ay taageersanyihiin aqlabiyada dadka:
5) Haddii laba iyo wax ka badan dawlad-goboleedyada deriska ahi ay ku heshiiyaan in ay bedelaan xuduudaha ay wadaagaan, Golaha Shacabku waa in uu ansixiyaa haddii saddex dalool laba dalool ka mid ah goloyaasha degmooyinku ogolaadaan xuduud bedelidda
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Federaaliisim&oldid=165771"